Ngiyakholelwa kuWebhu 3.0! | Martech Zone
Lesi silayidi kungenzeka sikhiqize ukububula nokububula lapho ngikubonisa phambi kozakwethu. Kumele ngikukhombise, noma kunjalo. Kube nokunyakaza okuqondayo kakhulu kuwebhu esikhathini esedlule. Sasine-Web 0.0 okwakungamabhodi wombhalo nezaziso. Uyazikhumbula lezo zinsuku? Ilinde isithombe ukuthi silayishe umugqa ngomugqa nemodemu yakho ye-baud engu-1200! (Yebo, ngiyazi ukuthi sengimdala!)
I-Web 1.0 ngempela yaba yisikhathi se-hoard nokulawula. I-AOL (khumbula 'faka igama elingukhiye I-CHEVY) yayibambe kakhulu enetheni futhi kwavela amasayithi amasango amaningi kwi-Intanethi. Uma ufuna umuntu ukuthi akuthole, kukubiza kakhulu ngesikhangiso se-banner kuwebhusayithi yesifunda.
I-Web 2.0 iseyinkathi yokulawula - kepha manje izinjini zokusesha, okungukuthi -Google, ungumnikazi wethrafikhi yewebhu. Sisekhona kwi-Web 2.0 namuhla - uma isiza sakho sizotholakala, kungcono usithole kumphumela wosesho. Iwebhu yezenhlalo manje isiqala ukuvela, noma kunjalo. Abantu bayahlangana futhi ukwabelana ngamabhukhimakhi ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zokubloga okuncane nokubhukhimakhi komphakathi.
I-Web 2.0 ikubonile ukwehla kokwabelana kwefayela kontanga nakho. UNapster kwadilizwa futhi abaduni, abaqhekeki namasela kwakufanele baye ngomshoshaphansi. Amaseva wama-proxy angaziwa kanye nezifufula ngePirate Bay ziye zangena phambili njengoba 'kumahhala' kuyintengo ye-Intanethi.
I-Web 3.0 = Yenqaba Ukubusa Kokusesha
I-Web 3.0 elandelayo, futhi ngikholwa ukuthi kungaba iWild West futhi! Izinjini zokusesha ziqaphele njengoba abantu bezihlela ngokwabo, babelana ngokuqukethwe kwabo ngokuhlanganiswa (i-Semantic Web), amanethiwekhi amancane, nezinhlelo ze-hybrid ezisebenza ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ezibandakanya ukusetshenziswa kweselula.
I-Web 3.0 = Ubugebengu
Ukuvota kwami ​​ukuthi ubugebengu buzokwenza i-HUGE leap njengoba ukucutshungulwa kweqiniso kontanga kuya ngokujwayelekile ngamakheli e-IP asaba manzi kakhulu kumanethiwekhi asekhaya we-bandwidth ephezulu. Ezinsukwini zikaNapster, ukufundisana kontanga empeleni kwakusho ukuthi uzolingana nomuntu. INapster yayiyisango lakho konke ukuxhumana. Ukubheja kwami ​​kukumanethiwekhi amancane lapho ungaxhumanisa khona izinhlelo zakho zokusebenza nabangane abathembekile bese uthumela amafayela ngaphandle kweseva (ngaphandle kwe-ISP yakho) ngokwazi. Amafayela ngokwawo ngeke akwaziwa, noma kunjalo, ngokusebenzisa ezinye izindlela zokubethela ezipholile.
Ngamanye amagama, ukwaba okuvamile kwama-CD nokushayela komculo phakathi kwabafundi namuhla kuzothuthela kuzinhlelo zokusebenza ezivumela ukwabiwa ngaphandle kwanoma ngubani ophakathi. Ingcindezi evela embonini yoMculo namaMovie kuhulumeni izoba SIKHULU ukuze sikwazi ukuhlola amanethiwekhi ethu asekhaya ukuzama ukulandela nokujezisa leli gagasi elisha labaphangi. Ngikufisela inhlanhla!
I-Web 3.0 = Ukukhangisa Okuqondile
Ngokuhambisana nokwehla kokubusa kwezinjini zokusesha, ukufika kokukhangisa 'okuzilawulayo' nakho kuzokhula. I-Google ngeke isaphungula ukuthengiselana phakathi kwabakhangisi nabashicileli, ubuchwepheshe obusha buzovumela Abakhangisi ukuthi baphathe izikhangiso zabo kubashicileli abafisa bona - futhi abashicileli bazokhokhelwa ngqo.
Tags: isemanticIwebhu ye-3Iwebhu ye-3.0
Ngo-Apr 29, i-2008 ku-2: 08 AM
Nginentshisekelo ekuphawuleni kwakho ngobugebengu enkathini entsha okuzoba yiwebhu 3.
Kuleli sonto kuphela, i-MS ikhiphe i-bung enkulu ngoshintsho lwayo lwe-
Ngiyabona isimo lapho izinhlelo zokusebenza eziningi zizosetshenziswa ngendlela yokubhalisela futhi usuku luyeza i-IMO lapho ikhompyutha entsha cishe izobe ikhululekile uma unikeza ukuthi uyavuma ukukhokhela isoftware yakho ngokusebenzisa indlela enemitha ngokuxhumeka kwakho kwe-BB.
Bengilokhu ngibuka izingxabano zezinkampani esikhaleni sokusakaza futhi njengoba ubuchwepheshe buzama ukusikisela, i-jukebox yabo yohlelo lokusebenza izoba ngumthelela omkhulu emadepho e-IT nezitolo zesoftware ngokufanayo.
Ngo-Apr 29, i-2008 ku-10: 42 AM
Isoftware njengesevisi iyabulala nakanjani isiphazamisi sobugebengu… Ngicabanga ukuthi okulandelayo kuzoba izinhlelo ezihlasela izinhlelo ze-SaaS. Ngenkathi ngidingida ubugebengu - bekufanele ngabe ngathi ngiqonde ukukhawulelwa kwimidiya efana nomculo, ividiyo, njll.
Ukuqondisisa okuhle, ngiyabonga!
Ngo-Apr 29, i-2008 ku-6: 54 AM
Sawubona lapho uDoug,
Ngiyayithanda imibono yakho nokuqonda kwakho ebhokisini lami leposi nsuku zonke. Ngiyabonga kakhulu!
Muva nje bengilokhu ngizwa i-racket ethile ngokuthi i-Web 3.0 izoba yini. Ngakho-ke, okuthunyelwe kwakho kusesikhathini. ITunes ikhombisa ukuthi abantu bazokuthokozela ukuthenga okuqukethwe kuqonde futhi kunciphe uma isipiliyoni 'esikhokhelwe' singcono kunesipiliyoni sepirate. (I-iTunes manje ingumthengisi womculo ongu- # 1 e-US)
Ngicabanga ukuthi okuqukethwe ukuphanga kuyizinga lomkhuba 'wesimo somuntu' kepha ngithanda ukwazi ukuthi ucabanga ukuthi izinkampani ezifana ne-Apple zizokwenzani ngeWebhu 3.0, ngicabanga ukuthi lokho kuzoqala ukuthi zenze okuthile okungu-2.0!
Bengilokhu ngibhala ibhulogi yeFoodie mayelana nedolobha engikulo njengamanje, eKyoto. Ngaqala cishe izinyanga eziyi-8 ezedlule. Ngithumele kusayithi lakho futhi ngathuthuka kaningi ngalesi sikhathi. Manje sengisezingeni lokuthi ngifuna ukusenza isikhathi sokuqala. Senza inhlolovo yokukhangisa encane manje futhi sinikeza imiklomelo yemibono emihle. Misa uma uthanda, bese ubheka ukudla! Sinekhanda lenhlanzi eliqoshiwe elimunyu, ubuthi be-pufferfish fin oboshwe futhi bucwila ngenxa yokushisa, njalonjalo.
Bheka lapha: Ucwaningo lweKyotoFoodie 'Win Junk'.
I-Web 3.0 izoba yi-'Wild West futhi '? Ummm! Angisakwazi ukulinda !! FAKA - IYAVULA !!!
Ngiyayithanda indlela onentshisekelo ngayo kubhulogi yakho, imigqa yezihloko zakho iyamangalisa! Kuphoqelela kakhulu!
Ngo-Apr 30, i-2008 ku-9: i-18 PM